DEG-DEG: Isku aadka horyaalka Premier League xilli ciyaareedka soo aadan oo la shaaciyay & kulamada isbuuca koowaad. – Gool FM
(England) 13 June 2019. Xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ayaa ku dhawaaqay isku aadka horyaalka Premier League xilli ciyaareedka soo aadan, waxaana kulamada isbuuca koowaad kasoo baxay ciyaaro aad u xiiso badan oo aad loo wada sugi doono.
Isbuuca ugu horreeyo wuxuu bilaaban doonaa Jimco – waxaana furi doona kooxda Liverpool oo gurigeeda Anfield kusoo dhaweyn doonta Norwich City oo dib ugu soo laabatay horyaalka muddo kadib.
Manchester City ayaa laga yaabaa iney dagaal u gasho horyaalkii saddexaad oo xiriir ah, waxeyna noqon doontaa kooxdii ugu horreysay ee sidaas sameysa tan iyo Man United oo 2006 ilaa 2009 aan laga dhexgalin, Pep Guardiola ayaana doonaya inuu dagaal kale galo.
Kooxda ay leeyahiin milkiilayaasha carbeed waxey ciyaari doonaan maalinta labaad (Sabti) waana kulanka ugu horreeya iyagoo marti u noqon doona West Ham United, Gunners waxey u safri doontaa kooxda Newcastle United oo aan la ogeyn wajiga ay yeelan doonto maadaama ay milkiilayaal carbeed iibsadeen.
Kulanka ugu weyn ee isbuuca ugu horreeya wuxuu dhexmari doonaa kooxaha Man United iyo Chelsea, labadaan kooxood ayaa ku jira xaalado kala duwan oo aad u cakiran, lama oga tababaraha xiga ee Blues – sidaas darteed waxaa wax xiiso leh in kulan weyn lagu bilaabo isbuuca koowaad.
KULAMADA ISBUUCA KOOWAAD:
Horyaalka wuxuu furmi doonaa 9-ka August, sidaas darteed laba maalin ka hor ayuu soo xirmi doonaa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda horyaalka Premier League.
Jimco: Liverpool v Norwich City
Miyey isku xiran yahiin doonista Man United ee Bruno Fernandes iyo mustaqbalka Paul Pogba ee kooxda?